DF oo caawa xabsi dhigtay saraakiil lagu tuhmayo ku lug lahaanshaha weerarkii Otto Otto - Caasimada Online
Home Warar DF oo caawa xabsi dhigtay saraakiil lagu tuhmayo ku lug lahaanshaha weerarkii...
DF oo caawa xabsi dhigtay saraakiil lagu tuhmayo ku lug lahaanshaha weerarkii Otto Otto
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa caawa Xabsi la dhigay Saraakiil ka tirsan Hay’adaha amaanka dowlada Somalia. Saraakiisha caawa xabsiga la dhigay oo tirro ahaan lagu sheegay 14 Sarkaal ayaa lagu tuhunsan yahay inay kaalin weyn ka qaaten weerarkii shalay lagu qaaday Xarunta Otto Otto oo ay degan yihiin Wasaaradaha Arrimaha Gudaha iyo tan amniga.
Saraakiisha la xiray ayaa la xaqiijiyay inay taliyayaal ka ahaayeen Koontoroolada laga soo galay Xaruntii la weeraray iyo waddooyinka ay soo mareen gaadiidka loo adeegsaday ismiidaaminta.
Saraakiisha caawa u hoyday Xabsiga ayaa maamuli jiray Isgoosyo ay kamid yihiin Dabka iyo tan ka timaada degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir,waxa ayna isugu jiraan Boolis iyo Nabadsugid.
Waxaa ku jira Saraakiisha la xiray kuwo maamuli jiray barahakoontarool ee Isgooska Bakaaraha kuwaa oo la sheegay in lagala sii dardaarmay gaadiidka ismiidaamiyay.
Saraakiisha xiran qaarkood ayaa lagu helay cadeymo kadib markii la dhageystay Teleefanada ay sida gaarka ah u isticmaalayeen.
Sidoo kale, Amaraka lagu xiray Saraakiisha ayaa waxaa bixiyay Wasiirka Amniga Qaranka Ducaalle oo tan iyo markii uu dhacay Qaraxa hayay baaritaan.
Geesta kale, Xariga Saraakiisha ayaa imaanaya 24 Saacadood kadib weerarkii qaraxyada ku bilaawday ee shalay lagu qaaday Xarumaha Wasaaradda Amniga iyo Gudaha oo ku taalla Otta Otta ee Magaalada Muqdisho.